စုချစ်သူ: ကိုတာတန်ကီ အမှတ်တရ ( Kota Tinggi Remembrance )
ကိုတာတန်ကီ အမှတ်တရ ( Kota Tinggi Remembrance )
၂၀၀၉ ခုနှစ် တရုတ်နှစ်သစ်ကူး အားလပ်ရက်မှာ SMC (သတိပဋ္ဌာန် ရိပ်သာ၊ စင်ကာပူ) မှ စီစဉ် ကြီးမှုးပြီး (Santisukharama Hermitage, Kota Tinggi, Malaysia) မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကိုတာတန်ကီ၊ သန္တိသုခရာမ ကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ဘုရားဦးရာဇိန္ဒ ၏ (၇)ရက် တရားစခန်းတွင် ဝေယျာဝစ္ဆ လုပ်အားပေး အနေနဲ့ ကူညီလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကနဦးကတော့ တရားထိုင်ဖို့ ရည်ရွယ် လိုက်ပါခဲ့သော်လည်း တရုတ် နှစ်ကူးမှာ စားသောက်ဆိုင်များ မှ ထမင်း၊ ဟင်းများ မှာယူနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အတွက် ယောဂီများ ဆွမ်းကျွေးရန် အခက်အခဲ ဖြစ်နေသဖြင့် ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရန် ဝေယျာဝစ္ဆ အနေနဲ့ ၀င်ရောက် လုပ်အားပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယောဂီ ၈၀ နီးပါး အတွက် နေ့စဉ် အာရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်း များကို သဲသဲ၊ သန်းသန်း၊ အနီလေး နဲ့ မရွှေစုတို့ မိန်းခလေး ၄ယောက် ဦးဆောင်ပြီး ဈေးဝယ်၊ ချက်ပြုတ် လုပ်အား အလှူဒါန ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ လောဘ ဒေါသ မောဟများမှ တတ်နိုင်သမျှ ဖယ်ခွာပြီး ကြိုးစား တရားအားထုတ်နေကြတဲ့ ယောဂီ သူတော်စင်များအတွက် လုပ်ကိုင်ပေးရတာမို့၊ အစား ကောင်းကောင်းဝင်မှ တရား ကောင်းကောင်း အားထုတ်နိုင်မှာလည်းဖြစ်တာမို့ အရသာ ရှိစေမယ့် အစားအစာများကို မမောနိုင် မပန်းနိုင် ကြိုးစား စီစဉ်ပေးကြရပါတယ်။ တစ်နေ့ အိပ်ချိန် ၃- ၄ နာရီသာ ရပေမယ့် သဲသဲ၊ သန်းသန်း နဲ့ အနီလေး တို့ အားလုံး ဘယ်သူမှ ပင်ပန်းတယ်လို့ တစ်ချက်မှ ညည်းညူခြင်း မပြုပဲ တကယ့်ကို စေတနာ သဒ္ဓါတရားများ အပြည့်နဲ့ ၀မ်းပမ်းတသာ လုပ်ကိုင်ကြတာ အင်မတန် ချီးကျူး ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ SMC မှ ဦးစီးကျင်းပတဲ့ တရားစခန်းများကို စင်ကာပူရှိ SMC တရားရိပ်သာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယခု လာမယ့်နှစ် ၂၀၁၂ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာ SMC မှ ဦးစီးကျင်းပမယ့် (၉)ရက် တရားစခန်းကို မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလမ်လမ်ပူ မြို့အနီး ၆ဧက နီးပါး ကျယ်ဝန်းတဲ့ အေးချမ်းသာယာလှတဲ့ Bodhiyarama ကျောင်းတိုက်ကြီးမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အား သတင်းကောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် တရုတ်နှစ်ကူး ကိုတာတန်ကီ၊ သန္တိသုခရာမ ကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ (၇)ရက် တရားစခန်းမှ ဓါတ်ပုံများကို အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ယောဂီများ တရားထိုင်ရာ ဓမ္မအဆောင်
ယောဂီများအတွက် အိပ်ရာ နေရာ
ယောဂီများ အတွက် နေ့ဆွမ်း
အေးချမ်းသာယာလှတဲ့ သန္တိသုခရာမ ကျောင်းတိုက်
သာဓု... သာဓု... သာဓု...
Posted by စုချစ် at 11/26/2011 08:15:00 PM
Programme for CNY Retreat at Bodhiyarama, KKB (Jan...
သတိပဋ္ဌာန်ရိပ်သာ ၀ိပဿနာ (၉)ရက် တရားစခန်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှ...
ချစ်ပါကွယ် ... လား... လား... လား...
Happy Birthday U Kyaw Thu!!!!
ကျွန်ုပ် အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသော နေ့တစ်နေ့
ANJLI - အဉ္ဇလီ
Myanmar Books Catalog
Myanmar Times in Burmese
Daw Aung San Suu Kyi (14)
General Aung San (9)
ကိုရေချမ်း နဲ့ မရွှေစု (36)
Myanmar Football News
Forum for Books
ညီမလေး နှင့် မမလတ်
အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာ နေလဓာတ်ပညာ
Myanmar Medicinal Plant Database